July 25, 2021 » Waa Maxay Sababta Uu Halyeygii Man City Ee Yaya Toure U Daawanayo » Axadle Wararka Maanta
Waa Maxay Sababta Uu Halyeygii Man City Ee Yaya Toure U Daawanayo
Halyeygii Manchester City iyo xulka qaranka Ivory Coast ee Yaya Toure ayaa lagu arkay isagoo daawanaya garoonka ay tababarka ku qaadanayaan ciyaartoyda Liverpool ee ku sugan waddanka Austria, halkaas oo ay ugu diyaar-garoobayaan xilli ciyaareedka cusub.
Richarlison Oo Madaxii Ronaldo Samaystay Ka Hor Kaddib Saddexlaydii
Barcelona Oo Guul Ka Gaarey Girona, Memphis Depay Oo Furtay
Toure ayaa subaxnimadii Khamiista waxa uu iska soo xaadiriyey garoonka isagoo daawaday tababarka, waxaana markii uu soo dhamaaday ay sawirro wada galeen weeraryahanka reer Senegal ee Sadio Mane, tababare Klopp iyo ciyaartoyda kale qaarkood.
Dad badan ayaa is-weydiiyey sababta uu Yaya Toure u tegay xarunta tababarka Liverpool, laakiin Sadio Mane oo faahfaahin ka bixiyey ayaa sheegay in uu isagu kusoo casuumay in uu yimaaddo 38 jirkan oo uu daawado.
Sadio Mane oo u warramay website-ka Liverpool ayaa yidhi: “Aniga ayaa ku idhi, ‘Yaya, ma kula tahay in fikradda ugu fiican ay tahay in aad timaaddo oo aad daawato tababarkayaga?!’ Waxa uu igu yidhi, ‘saaxiibkayoow, waan imanayaa halkaas! Kaliya weydii tababarahaaga.”
Mane oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray: “Yaya waa qof aad iyo aad u wanaagsan waxaanan garanyaa illaa 2004. Saaxiib wanaagsan ayuu ii yahay, sidaa darteed mar walba waanu xidhiidhnaa. Markii uu ii sheegay in aan tababaraha weydiiyo inuu iman karo tababarka oo uu daawan karo, waxa aan ku tidhi anigoo faraxsan, tababahaygu wuu ku farxi doonaa in Yaya noo yimaaddo maanta oo uu daawado tababarkayaga oo uu wax ka barto sababtoo wanaag oo dhan ayaan u rajaynayaa.”
Sababta uu Yaya Toure u daawanayay tababarka Liverpool ayaa waxa kale oo faahfaahiyey Sadio Mane oo yidhi: “Wuxuu doonayaa in mustaqbalka uu tababare noqdo, dhamaan ciyaartoyduna way ku faraxsanaayeen in ay arkaan, in ay sheeko degdeg ah kala wadaagaan City iyo Liverpool. Aad ayay u fiicnayd in aanu mar kale kulano.”
Dhinaca kale, Toure ayaa bartiisa Instagram waxa uu soo dhigay sawir uu la galay tababare Jurgen Klopp oo ay labaduba dhoola-caddaynayaan, waxaana qoraal uu raaciyey uu ku yidhi: “Farxad ayay ii ahayd inaan la kulmo tababare Klopp iyo in aan daawado tababarka ciyaartoyda Liverpool! Waa tababare sare oo dabacsan, run ahaantii waan ka helay waqtigii aan kula qaatay tababare Klopp iyo dadkii kale ee maanta joogay halkan.”
Yaya Toure oo ku guuleystay xiddiga Afrika, waxa uu dalkiisa Ivory Coast u saftay 101 kulan, halka uu Manchester City na u ciyaaray siddeed sannadood oo ahayd intii u dhaxaysay 2010 illaa 2018, waxaanu kula guuleystay saddex jeer horyaalka Premier League, laba League Cup iyo FA Cup.
Markii uu ka tegay Man City waxa uu u ciyaaray kooxda Qingdao Huanghai ee waddanka China oo uu ka caawiyey in ay usoo dallacdo horyaalka heerka koowaad, isagoo u qaaday horyaalka heerka labaad oo ay ka ciyaaraysay.
Shaqo tababarenimo ayuu ka bilaabay kooxda reer Ukraine ee Olimpik Donetsk oo uu heshiis sannad ah u saxeexay, waxaana uu xilli ciyaareedkan 2021-22 hoggaamin doonaa kooxdan iyadoo daawadeyaashuna ay arki doonaan Toure oo macallin ka ah garoonka Akhmat Arena.
Ashley furious with acquisition delay
Varane’s “first written offer” was rejected